मिर्चैयामा टोल सुधार समिति गठनः अध्यक्षतामा राघे साह – CIN Nepal Online Radio Network
सिरहा । सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका वाड नं. ५ मा टोल सुधार समिति गठन भएको छ ।
मिर्चैया नगरपालिकाको वाड नं. ५ का वडाध्यक्ष धिरेन्द्र कुमार साहको उपस्थितिमा मिर्चैयामा टोल सुधार समिति गठन भएको छ ।
राघे साहको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय मिर्चैया टोल सुधार समिति गठन भएको छ । उपाध्यक्षमा गोपाल साह, सचिवमा दिनेश साह, कोषाध्यक्षमा हरि पासवानले सर्वसम्मतमा चयन भएका छन्।
उक्त समितिमा मिर्चैया नगरपालिकाका प्रशासन शाखाका प्रमुख धनञ्जय महतो, मिर्चैया ट्राफिक प्रहरी पोष्टका प्रहरी नायब निरिक्षक रामनारायण यादव, जिवछ पासवान, केवल पासवान, जागेश्वर पासवान लगायत,स्थानीयबासी, नागरिक समाज,पत्रकार लगायतको रोहबरमा समिति गठन भएको छ ।